dhizaini: chengetedza $ 350 paunotenga samsung galaxy s8 / s8 + kana chinyorwa 8 pakutenga kwakanyanya
Kuru Nhau & Ongororo Deal: Sevha $ 350 paunotenga Samsung Galaxy S8 / S8 + kana Cherechedzo 8 paGood Buy
Deal: Sevha $ 350 paunotenga Samsung Galaxy S8 / S8 + kana Cherechedzo 8 paGood Buy
Yakanakisisa Kutenga ine kupihwa kukuru paSamsung mireza, iyo ingangodaro yakavandudzwa paBlack Chishanu. Zvakadaro, mutengesi anoti madhiri ane & ldquo;Nhema Chishanu mitengo, & rdquo; saka inogona kunge iri zano rakanaka kuzvitarisa zvisati zvapera.
Chaizvoizvo, iwe & apos; uchachengetedza $ 350 paunotenga Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 + kana Galaxy Note 8 paGood Buy. Chibvumirano chinoda kuti vatengi vagadzire chero emidziyo yakatengwa nechikamu chemwedzi cheVerizon kana Sprint.
Verizon inopa matatu matatu emahara emahara eUS $ 15.42 / mwedzi, $ 19.41 / mwedzi, uye $ 24.41 / mwedzi, zvichiteerana, kwemwedzi makumi maviri nemana. Kune rimwe divi, Sprint ine ivo kumusoro kwekubata kwe $ 16.66 / mwedzi, $ 20.83 / mwedzi uye $ 25.41 / mwedzi, zvichiteerana. Iwe unogona kunyange kutora imwe yekuwedzera 50% kubva pane imwe yevatatu neine nyowani yekumisikidza activation yeSprint Flex Lease.
AT & T ine yakawanda inonakidza dhiri, sezvo mutakuri anopa mahara Galaxy S8 paunotenga Galaxy smartphone. Ramba uchifunga kuti imwe chete yadzo inofanira kunge iri pamutsetse mutsva.
Chekupedzisira, iyo yakavhurwa Galaxy mafoni emafoni anokodzera kuita iyo dhiri inogona kuwanikwa paSamsung & apos; s 24-mwedzi Kubhadhara kana iwe uchishandisa yako Yangu Best Buy kiredhiti kadhi. Pamusoro peizvozvo, iwe unosvika pakusarudza kubva pane ina mavara anosanganisira Yakanakisisa Tenga yakasarudzika yekorari bhuruu (Galaxy S8 / S8 +) uye Deepsea bhuruu (Galaxy Note 8).
mabviro: Best Buy
iphone 12 pro max inowedzera nhare
maitiro ekuvanza maforodha pane Android
iyo pixel yeGoogle yakaitwa kupi
Sei uye riini kufanofananidza iPhone X (uye uwane nekukurumidza sezvazvinogona)
Apple Watch Series 4 vs Series 3 uye Series 2: ndeapi & apos; akasiyana, zvakadaro?
Maitiro ekugonesa kana kudzima swipe typing pane iOS 13
T-Mobile & apos; s ekutanga zvigadzirwa zvine mitsetse muna 2021 iri 5G router uye maviri Makati mafoni
Ko iyo Samsung Galaxy A52 uye A72 ine microSD kadhi slot?
Maitiro ekugadzirisa iyo 3D Kubata kunzwisisika pane iyo Apple iPhone 6s uye iPhone 6s Plus
Maitiro ekuisa icon packs pane Android isina midzi kana yechitatu-bato kuvhura
Agile Bvunzo Chirongwa - Isu Tinonyatsoda Imwe?